मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली लागू::Nepalese News Portal
काठमाडौं । सरकारले प्रविधिमा आधारित मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली लागू गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो प्रणाली सुरु गरेको बताएको छ ।
एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मालसामान ओसारपसार गर्नुपूर्व ढुवानी गरिने मालसामानको विवरण वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा राखिने यो प्रणाली लागू भएपछि राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुने सरकारले विश्वास लिएको छ ।
प्रविधिमा आधारित मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली उद्धघटन गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले औपचारिक, पारदर्शी र बैध व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रविधिमा आधारित मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली सुरु गरिएको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले प्रविधिको उपयोगबाट राजश्व प्रणालीलाई औपचारिक, बैध र पारदर्शी बनाउन ढुवानी अनुगमन प्रणाली सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले यो प्रणालीबाट साना व्यवसायीलाई हुने व्यवहारिक कठिनाइ हल गरेर जान सरकार प्रतिवद्ध रहेकोसमेत बताए । यस प्रणालीले अनौपचारिक क्षेत्रमा कारोबार हुने सबै आर्थिक कारोबार पनि पारदर्शी हुने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ ।
यो प्रणाली लागू भएसँगै सरकारले मालबहाक सामान चेकजाँचका लागि सञ्चालन गरिएको सबै पोष्टहरु हटाउनेछ । यो प्रणालीबाट बस्तुको ढुवानी व्यवस्थासमेत सहज हुने राजस्व अनुसन्धान विभागको दावी छ ।
oयो प्रणाली लागू गर्ने सरकारको निर्णयप्रति उद्योगीरव्यवसायीहरु भने असन्तुष्ट देखिएका छन् । सामान्य जानकारी र पूर्वाधारको आवश्यक तयारी नगरी उद्योगी, व्यवसायमाथि नै अल्झन आउने गरी हतारमा भिसीटिएस प्रणालीको शुभारम्भ गरेको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन ।